Boqor C/llaahi Geedi Shadoor “Kayeeli Mayno Thaabid keligiis ayaa baxaya, way wada baxayaan ama way wada joogayaan”. - Caasimada Online
Home Warar Boqor C/llaahi Geedi Shadoor “Kayeeli Mayno Thaabid keligiis ayaa baxaya, way wada...
Boqor C/llaahi Geedi Shadoor “Kayeeli Mayno Thaabid keligiis ayaa baxaya, way wada baxayaan ama way wada joogayaan”.
Muqdisho-(Caasimadda Online)-Kulankii Xalay ee Duubabka iyo Waxgaradka gobolka Banaadir ee kaga jawaabayeen warqadii ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha ayaa waxaa kasoo yeeray odayaasha hadallo kulol oo ay ujeedinayeen madaxda sare ee dalka.
Ugaas Cabdulaahi Geedi Shadoo oo hadalkooban ka jiidiyay ayaa yiri “Waxaan idiin sheegeynaa ragga madaxdda ah sidda madaxweynaha, Ra’iisul wasaaraha, iyo Taabit waa isla yimaadeen ha isla joogaan, hadii ay suuroobi weyso halkaan dhalahaa la diraa cidaannu yeeli meyso ayuu yiri Ugaas Cabdulaahi Geedi Shadoor.
Taabit Cabdi ayaa kudhawaaday in uu iska casilo xilka maamulka gobolka iyo duqa muqdisho asagoo usababaynaya in ay jiraan siyaasiyiin ka hawlgala madaxtooyada kuwaas oo kashaqaynaya iska horkeenka isaga iyo madaxda ugusaraysa dalka .